९/११ का 'मुख्य योजनाकार' कसरी अमेरिकी गुप्तचर निकाय एफबीआईको हातबाट फुत्किएका थिए - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २६ भाद्र २०७८, शनिबार १५:१८ मा प्रकाशित
बीस वर्षअघि अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित ट्विन टावरमा यात्रुवाहक विमान ठोक्काउने षड्यन्त्रको मुख्य योजनाकार मानिएका एक व्यक्ति आफूविरुद्ध मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ कुरिरहेका छन्। तर के उनलाई पहिला नै रोक्न सकिन्थ्यो?
फ्र्याङ्क पेलेग्रिनोले मलेशियाको एउटा होटलमा बसिरहेका बेला टेलिभिजनमा ट्विन टावरमा विमानहरू ठोकिँदै गरेको देखे।
“हे भगवान्, यो त खालिद शेख मोहम्मदको कामजस्तो छ,” उनको मनमा आएको थियो।
उक्त आक्रमणको योजना खालिद शेख मोहम्मदले नै बनाएको अनुमान पेलेग्रिनोले लगाए। किनभने उनलाई खालिद शेख मोहम्मदको उद्देश्य र महत्त्वाकाङ्क्षा धेरै नजिकबाट थाहा थियो।
अमेरिकी गुप्तचर संस्था फेडरल इन्भेस्टिगेशन ब्यूरो (एफबीआई) का विशेष एजेन्ट पेलेग्रिनोले खालिद शेख मोहम्मदलाई झन्डै तीन दशकदेखि पिछा गरिरहेका थिए।
नाइन-इलेभन (९/११) भनेर चिनिने ट्विन टावर आक्रमणको योजना बनाएको मुद्दा खेपिरहेका खालिद शेख मोहम्मदबारे अदालतको फैसला आउन बाँकी नै छ।
उनका एक वकिलले मुद्दा टुङ्गिन अझै २० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्ने बीबीसीलाई बताए।
तस्बिर स्रोत-GETTY IMAGES, ट्विन टावर हमलापछिको भग्नावशेष निरीक्षण गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश
अल-कायदाका तत्कालीन नेता ओसामा बिन-लादेन ९/११ हमलासँग सबैभन्दा नजिकबाट जोडिएका व्यक्ति हुन्।
तर आफूलाई ‘केएसएम’ भनेर चिनाउने खालिद शेख मोहम्मद यो आक्रमणका प्रमुख सूत्रधार रहेको उक्त घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठित अमेरिकी आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनले आफूले बनाएको योजना अल-कायदालाई दिएको बताइएको छ।
को हुन् खालिद शेख मोहम्मद
कुवेतमा जन्मिएर अमेरिकामा पढेका खालिद १९८० को दशमा अफगानिस्तानमा युद्ध चलिरहँदा त्यहाँ पुगेका थिए।
जिहादीहरूको निगरानी राख्न खटाइएका एफबीआईका गुप्तचर पेलेग्रिनो पनि ९/११ को घटनाअघिसम्म त्यही क्षेत्रमा थिए।
पेलेग्रिनोलाई सन् १९९३मा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको बम आक्रमणबारे अनुसन्धानका लागि एफबीआईले खटाएको थियो।
वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको बम आक्रमणमा संलग्न एक व्यक्तिलाई पैसा पठाएको पाइएपछि खालिद शेख मोहम्मद पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको दृष्टिमा परेका थिए।
प्रशान्त क्षेत्रका धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीमा बम विस्फोटन गर्ने सन् १९९५ को योजनामा समेत उनको नाम जोडिएपछि एफबीआईका गुप्तचरहरूलाई खालिद शेख मोहम्मदको महत्त्वाकाङ्क्षा कत्रो रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो।
निकै वर्ष पछ्याएपछि पेलेग्रिनोले सन् १९९०को दशकमा आफूले खोजिरहेका खालिद शेख मोहम्मद कतारमा रहेको सूचना पाए। अब उनी खोजी गरिएको मान्छे समाउन निकै नजिक पुगिसकेका थिए।
पेलेग्रिनोको टोलीले ओमान हुँदै कतार छिरेर खालिद शेख मोहम्मदलाई पक्राउ गर्ने योजना बनायो। उनलाई अमेरिका लैजान विमान समेत तयार पारिएको थियो।
पक्राउ पर्नबाट जोगिए
तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES, खालिद शेख मोहम्मद
तर कतारमा रहेका अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू मोहम्मदलाई पक्राउ गर्ने योजना सुनेर हच्किए।
पेलेग्रिनोले मोहम्मदको संलग्नताबारे सबै सुनाए पनि अमेरिकी राजदूत तयार भएनन्। उनीहरू कतारमा कुनै पनि जोखिम मोल्न चाहँदैनथे।
“मलाई लाग्छ यसबाट त्यहाँ निकै ठूलो हलचल हुने उनीहरूको बुझाइ थियो,” उनी सम्झन्छन्।
अन्ततः अमेरिकी राजदूतले मोहम्मद कतारी अधिकारीहरूको निगरानीबाट उम्किएको खबर सुनाए।
“त्यस बेला निकै रिस उठ्यो र निराश पनि भएँ। हामीलाई थाहा थियो कि त्यो अवसर हामीले गुमाइसकेका थियौँ,” उनले भने।
उनलाई पक्राउ गर्ने अमेरिकाको योजनाबारे सूचना पाएको ठानिएका खालिद शेख मोहम्मद कतारबाट भागेर अफगानिस्तान पुगिसकेका थिए।
सन् १९९० को दशकसम्म मोहम्मद अमेरिकी निसानाको मुख्य प्राथमिकतामै नरहेको तथ्य पेलेग्रिनोलाई पनि थाहा थियो।
उनले मोहम्मदलाई अमेरिकाको सर्वाधिक खोजिएका मानिसको सूचीमा शीर्ष १० मा पार्न प्रयास नगरेका पनि होइनन्, तर उनलाई त्यस्ता धेरै आतङ्कवादी त्यस्तो सूचीमा रहेको जबाफ दिइयो।
त्यसको केही वर्षसम्म मोहम्मदको नाम धेरैतिर जोडिएर आइरह्यो। विश्वका फरकफरक ठाउँबाट पक्राउ परेका सन्दिग्ध आतङ्कवादीहरूले फोन गर्ने सूचीमा समेत खालिद शेख मोहम्मदको नाम भेटिएपछि उनको आतङ्कवादसँगको सम्बन्ध थप प्रष्ट भयो।
ओसामा बिन लादेनसँग कस्तो सम्बन्ध?
यही बीचको समयमा उनले अल-कायदाका ओसामा बिन लादेनसँग भेटेर अमेरिकी टावरहरूमा ठोक्काउन विमानचालकहरूलाई तालिम दिने योजना बनाए।
परिणामस्वरूप ९/११ को हमला भयो।
हिरासतमा रहेका अल-कायदाका एक प्रमुख व्यक्तिले खालिद शेख मोहम्मदलाई पहिचान गरेबाटै त्यो घटनामा उनको संलग्नताबारे पेलेग्रिनोको आशङ्का पुष्टि हुन्थ्यो।
“त्यहाँ सबैले महसुस गरे कि मेरै (खोजीको) मान्छेले यो सबै गरेको थियो,” उनी भन्छन्।
“जब हामीले यो सबै गर्ने त्यही मान्छे हो भन्ने पत्ता लगायौँ म जति दुःखी अरू कोही भएन।”
पाकिस्तानमा पक्राउ परे
ट्विन टावरमा आक्रमण भएको दुई वर्षपछि सन् २००३ मा खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तानमा समातिए।
पेलेग्रिनो आफ्नो अनुसन्धानबाट जुटेका प्रमाणका आधारमा अब खालिद शेख मोहम्मदविरुद्ध मुद्दा चल्नेमा ढुक्क थिए। तर उनी अकस्मात् गायब भए।
उनलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले “ब्ल्याक साइट” भनिने बयान लिनका लागि उच्चस्तरीय प्रविधि प्रयोग हुने ठाउँमा लगेको रहेछ।
“यो मान्छेलाई थाहा भएका कुराहरू मलाई निकै छिटो चाहिएको छ,” एक वरिष्ठ सीआईए अधिकारीले त्यस बेला भनेका थिए।
मोहम्मदलाई निसासिनेगरी पानीमा डुबाएर १८३ पटकसम्म यातना दिइएको थियो।
उनको गुदद्वारमा पानी हालेर, अप्ठ्यारो आसनमा राखेर, सुत्न नदिएर, निर्वस्त्र पारेर अनि बालबच्चाको हत्या गरिदिने धम्की दिएर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको थियो।
त्यस बेला उनले धेरै षड्यन्त्रमा आफू सहभागी भएको स्वीकारेका थिए। तर पछि सिनेटको एउटा प्रतिवेदनमा उनले दिएको अधिकांश सुराक झुटो भएको उल्लेख छ।
खालिद शेख मोहम्मदसँग भेट
सीआईएको गुप्त हिरासतबारे कुरा चुहिएपछि मोहम्मदजस्ता नामुद कैदीलाई सन् २००६ मा ग्वान्टानामो बेमा सारियो जहाँ एफबीआईको पनि पहुँच थियो।
आफूले वर्षौँदेखि खोजेका मोहम्मदलाई पेलेग्रिनोले सन् २००७ मा त्यहीँ पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेटे।
“उसका गतिविधिबारे प्रमाण जुटाउन सन् १९९० कै दशकदेखि मैले काम गरिरहेको थिएँ भन्ने उसलाई जानकारी गराउनु थियो,” टेबलमा आमुन्नेसाम्नुने बसेर कुराकानी गरेको सम्झँदै पेलेग्रिनो भन्छन्।
सेप्टेम्बर ११ को घटनाबारे खालिद शेख मोहम्मदले के भन्ने नखुलाए पनि पेलेग्रिनो भन्छन्, “मैले उसलाई खुलेर गफ गर्ने र हास्यचेत भएको मान्छे पाएँ।”
FRANK PELLEGRINO,लामो समय मोहम्मदलाई पिछा गरेका एफबीआई एजेन्ट फ्र्याङ्क पेलेग्रिनो
ग्वान्टानामोमा सुनुवाइका क्रममा खालिद शेख मोहम्मदले प्रायः आफूतिर ध्यान खिच्न खोजेको देखियो। तर ती कुख्यात आतङ्ककारीले आफ्ना कामप्रति कुनै पश्चात्ताप नदेखाएको पेलेग्रिनोको भनाइ छ।
उनले आफ्नो संलग्नता स्वीकार्नेभन्दा पनि सुनुवाइ लम्ब्याएर मजा लिइरहेको पेलेग्रिनोको बुझाप थियो।
छ दिनसम्म बयान लिएपछि थप बयान दिन उनले अस्वीकार गरे।
त्यही बीचमा खालिद शेख मोहम्मदलाई सुनुवाइका लागि न्यूयोर्क लग्न खोजिएको भए पनि त्यसको विरोध भयो। न्यूयोर्कवासीले “आफ्नो घरछेउमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नल्याउन” भन्दै विरोध गरे।
त्यसपछिको सुनुवाइ ग्वान्टानामोकै सैन्य अदालतमा चलेको भए पनि कोभिड महामारी र प्रक्रियागत ढिलाइले मुद्दा अझै टुङ्गो लागेको छैन।
खालिद शेख मोहम्मदका वकिल डेभिड नेभिन पछिल्लो सुनुवाइ पनि ९/११ हमलाको २० औँ वर्षमा केही भइरहेको देखाउन मात्रै राखिएको ठान्छन्।
अमेरिकाकै सबैभन्दा ‘ठूलो र विवादास्पद मुद्दा’
सन् २००८ बाट खालिद शेख मोहम्मदको मुद्दा हेरिरहेका उनका वकिल तत्कालै सुरु गर्ने भनिए पनि अझैसम्म अदालतमा यसको वास्तविक सुनुवाइ सुरु नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार यो मुद्दा दर्ता भएयता “आठदेखि नौजना” न्यायाधीश परिवर्तन भइसकेका छन्।
नेभिन यसलाई अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र विवादास्पद आपराधिक मुद्दाको सुनुवाइ भएको बताउँछन्। उनका अनुसार करिब ३५,००० पृष्ठको अघिल्ला सुनुवाइहरूको विवरणबारे जानकार हुन नयाँ न्यायाधीशलाई धेरै समय लाग्ने गरेको छ।
यो मुद्दासँग सम्बन्धित पाँच प्रतिवादीलाई सीआईएको गोप्य हिरासतमा यातना दिएर बयान लिइएको बताइएको छ।
यसरी लिइएको बयानमा प्रश्न उठाइने गरिएको छ।
उनीहरूलाई यातना दिन अमेरिकाले निकै तयारी र बन्दोबस्त गरेको नेभिनको ठम्याइ छ।
अमेरिकाकै कुख्यातमध्येका एक व्यक्तिको मुद्दा लड्दाको अनुभवबारे नेभिन कुरा गर्न चाहँदैनन्।
बरु अमेरिकी वकिल भएका कारण उनलाई खालिद शेख मोहम्मदका मानिसहरूले सुरुमा निकै शङ्का गरेका थिए। तर लामो घुलमिलपछि अहिले उनीहरू एकअर्कासँग परिचित भइसकेका छन्।
अतिगोप्य हिरासतमा कैदी
सुरुमा वकिलहरू खालिद शेख मोहम्मदलाई भेट्न जाँदा कालो सिसा भएको गाडीमा राखेर ४५ मिनेट घुमाएपछि उनलाई राखिएको अतिगोप्य स्थानमा पुर्‍याइन्थ्यो।
तर अहिले उनलाई कम गोप्य स्थानमा राखिएको छ।
नेभिनजस्ता वकिलहरू ९/११ आक्रमणका पीडित परिवारहरू सुनुवाइका लागि टाढाबाट आउनुपरेको विषयमा पनि आफूहरू संवेदनशील भएको बताउँछन्।
उनीहरूसँगको भेटमा कतिपय पीडित परिवारका मानिसले आक्रमणकारीको पक्षमा मुद्दा लडेकोमा चुनौती दिने गरेका छन् भने कतिपयले मुद्दाको प्रक्रियाबारे सोध्ने गरेका छन्।
“वर्षौँदेखि प्रताडनामा रहेका उनीहरूको पीडामा कुनै चोट नपरोस् भनेर हामी धेरै सजग हुने गरेका छौँ,” नेभिन भन्छन्।
यो मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न लामो समय लाग्नुको एउटा कारण यसमा माग गरिएको मृत्युदण्डको सजाय पनि भएको बताइन्छ। मृत्युदण्डको माग नगरिएको भए मुद्दा धेरै अघि टुङ्गोमा पुगिसक्ने वकिलहरूको दाबी छ।
यो मुद्दा किनारा लगाएर मात्रै अवकाश लिन पेलेग्रिनोले आफ्नो सेवावधि तीन वर्ष थप गरे।
अवकाश पाउने उमेर पुगेपछि विशेष गुप्तचर पेलेग्रिनो अहिले एफबीआईबाट बिदा भइसकेका छन्।
लामो समय खालिद शेख मोहम्मदलाई पिछा गरेका यी एउटै पछुतो छ। सन् १९९० को दशकमै उनले मोहम्मदलाई पक्राउ गरेका भए ९/११ को हमला रोक्न सकिन्थ्यो कि भन्ने उनलाई लागिरहन्छ।
-बिबिसीबाट साभार सामग्री
-गोर्डन कोरेरा र स्टीभ स्वन‍,बीबीसी विश्व सेवा